Somaliland Oo Sii Deysay Maxaabiistii Dagaalka Tukoraq Ee Puntland Iyo Tiradooda + [ Muuqaal ] |
Somaliland Oo Sii Deysay Maxaabiistii Dagaalka Tukoraq Ee Puntland Iyo Tiradooda + [ Muuqaal ]
Hargaysa(GNN)Madaxwaynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa Cafis Madaxwayne Waxa uu u fidiyay maxaabiistii lagu soo qabtay dagaalkii ciidamadda somaliland iyo kuwa maamul goboleedka Somaliyeed ee puntland ku dhex maray deegaanka tukaraq.
Afhayeenka Madaxwaynaha Maxamuud Warsame Jaamac oo saxaafadda kula hadlay xarunta madaxtooyadda ayaa Sheegay in sababta loo sii daayay ay tahay sidii deegaankaasi uga dhalan lahayd nabad buuxda.
Maxamuud warsame ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in madaxwaynahu uu nabad ugu baaqayo maamul goboleedka Somaliyeed ee Puntland si khilaafyadda loogu dhameeyo gogol nabadeed.
Maxaabiista uu maanta madaxwaynahu balan qaaday in la siidayn doono ayaa tiradoodu waxa ay gaadhaysaa 14 maxbuus kuwaas oo lagu celin doono maamulka puntland,madaama oo hore ciidanka ugu soo qabteen dagaal dhex maray ciidamadda qaranka somaliland iyo kuwa maamulka Puntland.
Ciidanka somaliland ayaa tukaraq kala wareegay sanadkii hore ciidanka Maamulka puntland oo deegaankaasi ku sugnaa ilaa haddana waxa gacanta ku haya ciidanka qaranka somaliland oo deegaankaasi ka islaaxiyay nabad buuxda.